Ra’iisul Wasaarihii hore ee Soomaaliya oo ku taliyay in wada hadal toos ah lala galo Al-Shabaab | Sagal Radio Services
Ra’iisul Wasaarihii hore ee Soomaaliya oo ku taliyay in wada hadal toos ah lala galo Al-Shabaab
Sagal Radio Services • News Report • September 11, 2019
Ra’iisul Wasaarihii hore ee Soomaaliya Cabdi Faarax Shirdoon (Saacid) ayaa ku taliyay in wada hadal toos ah lala furo Al-Shabaab, isagoo caddeeyay in haddii uu xal milateri adkaado ay tahay in xal siyaasadeed la furo.
Mr Saacid ayaa sheegay in Al-Shabaab la kari waayay, isla markaana ay aheyd in laga guuleysto.
“Aniga waxaan qabaa in wada hadal toos lala falo, runtii Al-Shabaab waa dad Soomaaliyeed waa la kari waayay, waxaa fiican in laga guuleysto nabadna wada hadal ku timaato, arrintaas lafteeda lama dhayalsan karo”ayuu yiri Ra’iisul Wasaarihii hore Cabdi Faarax Shirdoon.
Sidoo kale waxaa uu sheegay in sugida amniga dalka ay u baahan tahay in la helo dad aqoonyahano ah oo khibrad u leh
“Haddii xal milateri adkaado, waxay u baahan yahay in la helo xal siyaasadeed”ayuu hadalkiisa sii raaciyay Cabdi Faarax Shirdoon.
Mas’uuliyiin hore iyo Siyaasiyiin ayaa horay ugu baaqay in wada hadal lala galo Al-Shabaab, balse Al-Shabaab ayaa dhowr jeer diiday inay wada hadal la galaan dowladda Federaalka, iyadoo dalka ay ku sugan yihiin Ciidamo shisheeye, waxaana Shabaab ay sheegeen inay dowladda u aqoonsan yihiin inay tahay Dowlad Riddo ah.